Laanqeeyta Cas oo joojisey lacagihii safarka qoysaska la isugu keeni jirey - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Familjåterförening och Röda korset
Laanqeeyta Cas oo joojisey lacagihii safarka qoysaska la isugu keeni jirey
Publicerat fredag 15 januari 2010 kl 16.53
Foto: Khalil Hamra/Scanpix.
Ururka Lanqeeyrta Cas (Röda Korset) ayaan mar danbe lacagaha safarka ka caawin doonin qaxootiga dalkaan oo raba in ay keensadaan lana midoobaan qooysaskooda.Ururka ayaa sheegey in xaalad dhaqaale oo aad u adagi la soo daristey ururkooda.
Eva Hagberg oo iyadu ah madaxa laanta ururkaas laanqeeyrta cas u qaabilsan arrimaha qaxootiga ,ayaa sheegtey in ururku sii wadi doono taageeridda qooysaska leysu keenayo laakiin wadooyin kale oo cusub loo mari doono xallinta dhinacyada dhaqaalaha ama lacagaha la xiriira.
Ururka laanqeeyrta cas wuxuu bilaabey hawshaan caawinta isu keenidda qooysaska kala maqan bartamihii toddobaataneeyaddii qarnigii la soo dhaafey.
Waxaa ka mid ah waxyaaha ururka laanqeeyrta casi ku fakarayo si uu u xaliyo helidda lacago dadkaas soo galootiga ahi eheladooda ku keensadaan,in dadyoowga ehelkooda keensanayaa ay ka dalbadaan lacag deyn ah oo aan ribo saarneeyn bangiga loo yaqaano JAK oo isagu ah bangi macaamiishiisa amaahiya deymo aaysan wax riba ahi saarneeyn laakiin isla waqtigaas waxaa lag rabaa qofka amaahdaas qaadanayaa in uu qadar lacag ah ku keedsado isla bangigaas JAK.